Taariikhda Godane - BBC Somali
7 Sebtembar 2014
Axmed Cabdi Godane waxa uu ka dhashay magaalada Hargeysa halkaasi oo uu ku qaatay dugsiyada hoose ,dhexe iyo sare. Horraantii sagaashamaadkii Axmed Godane waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro ku guuleystay deeq waxbarasho oo uu ku deeqay Muftiga weynaa ee Sacuudiga Shiikh C/casiis C/laahi Binbaaz, waxana uu waxbarsho u tagay dalka Pakistan.
Waxa uu halkaas shahaadada koowaad ee jaamacadda kaga qaatay jaamacadda International Islamic University ee ku taalla magaalada Islamabad.Waxa uu bartay cilmiga dhaqaalaha .
Image caption Dagaalyahannada Al-shabaab
Axmed Godane isaga iyo labo nin oo kale,oo mintid ah oo midkood uu ahaa Ibrahim Afgaan, ayaa waxa ay dhaqdhaqaaq Islaami ah ka bilaabeen Hargeysa oo ay ku soo noqdeen 1997-dii,iyaga oo xilligaasi afkaartoodu ay aad uga horjeeday Madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal.
Axmed Godane waxa uu yimid koofurta Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho 2002, laakiin magaalada oo u kala qeybsaneyd Hogaamiye kooxeedyo si fudud uguma hirgalin damacoodii ahaa in ay dhisaan urur dhaqdhaqaaq Jihaad ka bilaaba halkaas.
Xilligii Maxkamadaha Islaamiga, Axmed Godane waxa uu ahaa Xoghayihii Guud ee Maxkamadaha Islaamiga . Waxa uu hoggaanka Alshabab kala wareegay Ismaaciil Caraale oo ahaa hogaamiyihii ugu horeeyay ee Al-shabab kaas oo Mareykanku ay xireen lana geeyay xabsiga Guantanemo kadib markii lagu qabtay Jabuuti isaga oo ku sii jeeday dalka Ereteria.
Image caption Dhalinyaro badan ayaa ku biirtay Al-shabaab
Axmed Godane waxa ay saaxiib dhaw noqdeen Aaden Xaashi Cayroow oo ahaa Madaxa ciidamada guud ee Alshabaab iyo kuwa qaaska ah ee loo yaqaano amniyaatka. Waxaa Godane uu ku gacan siiyay Cayroow aasaasidii xarunta tababarka ciidan ee Salaaxudiin Alayuub.
Bishii May 2008-dii, Mareykanku waxa ay gantaal ku dileen Aden Xaashi Cayroow gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, waxii ka danbeeyay guud ahaan hogaanka ciidan iyo kuwa amniyaatkaba waxa ay hoostagayeen Axmed Godane kaas oo awoodii maamul ku darsaday middii ciidan.
Image caption AL-shabaab waxaa laga saaray deegaano badan.
Axmed Godane 2007-dii ilaa 2008-dii, waxa uu dagaal ba'an ku qaaday hey'adaha Samafalka gaar ahaan kuwa reer Galbeedka waxana dalka isaga baxay gaar ahaan magaalooyinkii ay Al-shabaab ka talinayeen hey'ado waaweyn iyo kuwa Qaramada Midoobay oo caawin jiray shacabka Soomaaliyeed.
Axmed Godane waxaa uu ahaa nin isqariya, oo aan wajigiisa la arag waxana uu la baxay Shiikh Mukhtaar Abu Zubeyr.
Waa nin aftahan ah oo mayal adag islamarkaana aanan jecleyn in awoodda iyo go'aan qaadashada ururka dhexdiisa lagula loolama.
Axmed Cabdi Godane waxa uu amar ku bixiyay in la laayo culumada Soomaaliyeed ee ka horjeeda fikirka Al-shabab, waxana Puntland iyo koofurtaba lagu dilay culumo caan ah. Qeybsankii Alshabab
Xog ku saabsan Axmed Cabdi Godane:
Axmed waxaa Mareykanku madaxiisa dul dhigay 7 milyan oo dollar 2012-kii
Wuxuu ku biiray al-Qaacida 2012-kii
Waxay dil ku xukuntay maxkamadda Hargeysa isagoo maqan weerarkii Somaliland
Wuxuu wax ku bartay dalalka Sudan iyo Pakistan, halkaasi oo xagjir uu ku noqday, waxaa la sheegay inuu ka soo dagaalamay Afganistan.
Wuxuu ahaa nin sumacad ku leh aftahanimada isagoo ahaa gabyaa. Waxaana loo yaqaanay magaca Mukhtar Abu Zubayr.
Hogaamiyaha Alshaba waxaa qilaaf xooggan uu soo kala dhex galay isaga iyo madaxdii uruka ee la shaqeyneysay waxana ay tani keentay in markii ugu horeysay ay go'aan wadajir ah oo looga horjeedo Godane ay saxiixaan ragga kala ah 1-Sheekh Mukhtaar Rooboow Cali (Abuu mansuur) 2 Sheekh Xasan Daahir Aways 3-Sheekh Abuubakar Alzaylici (Ibrahim Afghaan) 4-Sheekh Zubayr Al Muhaajir 5-Macalim Burhaan sheikh Xaashi .
Image caption Godane ayaa dilay Xammami oo ka muuqda computerkan
Axmed Godane waxa uu ka takhulusay dhamaan raggii ka horyimid waxana weerar Baraawe ka dhacay lagu dilay Ibrahim Afghaan iyo Macalim Burhan iyo waxa sidoo kale Shabaabku ay dileen Cumar Xammaami (Abu Mansuur Al-Amriiki) oo ka mid ahaa dagaalyahanada ajnabiga ah ee ka tirsanaa AL-shabaab.
Xasan Daahir waa uu ka baxsday waxaana kadib uu gacanta u galay dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur waxaa uu go'doon ku noqday degaanada uu ka soo jeedo. Dowladaha Mareykanka iyo Britain ayaa waxa ay si buuxda ugu aqoonsadeen Al-shabab in ay yihiin urur argagaxiso.
Bishii Febraayo 2012-kii ayaa kadib beeca ay wada galeen Al-shabab iyo Al-qaacidda waxaa Al-shabab ay si rasmi ah shaaca uga qaaday inay ku biirtay ururka Al-qaacidda waxana hadal wadajir ah soo saaray Hogaamiyaha Al-qaacidda Dr Eyman Althawahiri iyo Axmed Cabdi Godane.
Axmed waxa uu abaabulkoodu lahaa weeraro badan oo ka dhacay dalalka Uganda, Kenya iyo Soomaaliya kuwaas oo ay ku dhinteen dad aad u farabadan.
Image caption Godane waxa uu sheegtay masuuliyadda weerarkii Westgate
Maraykanka oo xaqiijiyay dilka Godane
5 Sebtembar 2014
Al-shabaab oo xaqiijiysay weerarka lagu qaaday Godane
2 Sebtembar 2014
31 Agoosto 2014